Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Yemen oo shir isugu yimid ay ku doorteen maamul cusub
Jaaliyadda Yemen oo shir isugu yimid ay ku doorteen maamul cusub
Jaaliyada dalka Yemen ayaa isugu yimid shir ay ku doorateen maamul cusub. Waxaa shirka ka soo qayb galey bulshada qaybaheeda kala duwan sida uruka OYSU, .uruka Haweenka. Waxaa kaloo joogay culamaada iyo odayaasha. Doorashada ayaa u dhacday sidii loogu talagay.
Waxaa shirka kaga soo qayb kaley khadka taleefanka Hogaanka gaashaandhiga jabhada sheekh Deeq oo warbixin dheer siiyay kasoo qayb galayaashii doorashada. Waxaa kaloo khadka teleefoonka kaga soo qaybgalay khadka teleefoonka Gud.Ku-xigeenka HAAB. Ka soo qayb galka madaxda ayay dadku si aad ah ugu jeelanaayeen wuxuuna Hogaanka gaashaan dhiga ka warbixiyay wacyiga guud ee maanta shacabka Ogaadeeniya ay ku jiraan gaar ahaan kuwa gudaha iyo halganka meeshuu marayo iyo xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta ogaadeeniya iyo marxalada uu halganku maanta marayo, taasoo ay ku tilmaameen inuu gaadhay meel aan laga soo laaban karin. Dhanka kale wuxuu sheegay in uu guumaysigu maanta marayo abid meeshii ugu xumayd ayna maalin kasta ciidamadoodii goosanayaan
Intaas waxaa dheer oo aan la halmaami karin kooxda Horseed oo soo bandhigtay riwaayado, heeso cajiiba iyo ciyaaro kuwaas oo dadkii meesha joogay ay aad iyo aad ugu riyaaqeen oy dalbadeen in markale loogu celiyo.
jaaliyada Yemen waa jaaliyad taariikh dheer oo qiimoweyn ugu fadhida halganka Ogadenia. waa Jaaliyad geesi oo ka guulaysata marwalba dabadhilifka cadawga iyo maangaabka gumeyste kalaalka ah. Waxaa la hubaa inay joogidoonaan guusha kama dambaysta ah taariikhda halgfanka gobanimodoonka Ogadenia ay baal dahab ah ka galayso.
Guul guul guul guul guul allaahu akbar walilaahi alxamdu